VCI bepa nokuti ferrous simbi - China Ma Anshan Steel Packaging
VCI Anti-ngura Paper -Eco-ushamwari, mari uye nzira itsva Anti-ngura kavha zvinhu VCI bepa kuti ferrous metal- Pane mhando mbiri mamiriro: VCI bepa pe unhani (PA) uye pasina Pe (PO). chigadzirwa ichi chinoumbwa kunyanya kabhoni simbi uye vachikanda simbi. PO chigadzirwa inogona zvishandiswezve 100% uye kushandiswa rwaiparadzanisa akaturikidzana zvikamu zvesimbi. PA chigadzirwa anogona kupa isapinda uye greaseproof mashandiro, saka rinoshandisirwa chokunze kavha zvokunyama uyewo. Tinogona pp ...
VCI Anti-ngura Paper
VCI bepa nokuti ferrous simbi- Kune mhando mbiri mamiriro: VCI bepa pe unhani (PA) uye pasina Pe (PO). Chigadzirwa ichi chinoumbwa kunyanya kabhoni simbi uye vachikanda simbi. PO chigadzirwa inogona zvishandiswezve 100% uye kushandiswa rwaiparadzanisa akaturikidzana zvikamu zvesimbi. PA chigadzirwa anogona kupa isapinda uye greaseproof mashandiro, saka rinoshandisirwa chokunze kavha zvokunyama uyewo. Tinogona kupirinda Logo musi VCI papepa.
◆ Long-nguva kudzivirirwa simbi uye simbi zvigadzirwa.
◆ Musangano Nemirayiro uye mitemo Jis Z 1535, QB1319-2010, TRGS 615, ROHS, etc.
Various Zviidzo (50 - 280g / m2)
Previous: VCI bepa mhangura
Next: VCI bepa nokuti Multi-metal
Sei Vci Paper Work
Vci Paper Tsanangudzo
Vci Paper Sei
Vci Paper Per thousand Spec
VCI ngura-HUMBOWO KRAFT PAPER
Chii Vci Paper
music bepa laminated VCI firimu